साउदीमा कम्पनीले निकालेपछि, सडकमा अलपत्र परेका गोबिन्दको पिडा - समय-समाचार
साउदीमा कम्पनीले निकालेपछि, सडकमा अलपत्र परेका गोबिन्दको पिडा
४ बैशाख २०७७, बिहीबार ०८:०९
साउदी अरबमा अलपत्र परेका गोविन्द नेपालीले फोन सम्पर्कमा आफ्नो पीडा यसरी सुनाए :
म साउदी अरबको अल्कासिम बराइदास्थित तस्लिया भन्ने स्थानमा रहेको निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने एउटा कम्पनीमा काम गर्दै आएको थिएँ ।
छ महिना अगाडि मलाई कम्पनीको म्यानेजरले चोरीको झूटो आरोपमा फसायो । उसले अदालतमा केस गर्‍यो । अदालतमा मैले आरोप स्वीकार गरिनँ । तर, पनि मलाई चार महिना जेल हालियो ।
जेलबाट निस्केपछि म घर फर्किने मनस्थितिमा थिएँ । त्यतिबेला यसरी नेपालमा लकडाउन होला भन्ने थाहा थिएन । इदको छुट्टीमा नेपाल फर्किने योजना थियो ।
तर, मुदीर (कम्पनीको मालिक) ले तेरो केस अझै सकिएको छैन, केस सकेर आइज, अनिमात्रै पासपोर्ट दिन्छु भनेर रोक्यो ।
प्रहरीमा क्लीनचिट लिन म बारम्बार धाएँ । तर, उनीहरुले विभिन्न बहानामा अल्झाइहे । यत्तिकैमा नेपालमा लकडाउन भयो । म घर फर्किन पाइनँ ।
म त्यही कम्पनीमा काम गर्ने अरु नेपाली दाजुभाइहरुको कोठामा बसिरहेको थिएँ । अस्तिको दिन एकाएक कम्पनीका म्यानेजरले कोठामा पसेर मेरो मोबाइल र पर्स खोसे । अनि मलाई घिच्याएर बाहिर निकाले । म भोकभोकै रातभरि सडकमा बसेँ ।
भोलिपल्ट नेपाली साथीहरुसँग सम्पर्क गरेँ । उनीहरुले कम्पनीको मालिकसँग कुरा गर्न भनेर मलाई बोलाए । म भित्र गएँ । साथीहरुले कुरा गरेपछि म्यानेजरले मेरो पर्स र मोबाइल फिर्तां गरे ।
हिजोको रात म फेरि साथीहरुसँगै कोठामा बसेँ ।
तर, आज बिहान कम्पनीको मुदिर र म्यानेजर फेरि कोठामा आए । म्यानेजरले मलाई कुटपिट पनि गरे । उनीहरुले मलाई घोक्र्याउँदै बाहिर निकाले । जुत्ता पनि लगाउन दिएनन् ।
अहिले म सडकमा नै छु ।
नेपाली एम्बेसीमा फोन गरेँ । उताबाट अहिले लकडाउनमा केही गर्न सकिँदैन, मिलेर बस्नू भन्ने जवाफ आयो । अब म कहाँ जाने ?
खल्तिमा १–२ सय रियाल छ । लगाएको एकजोर कपडा छ । अरु केही पनि छैन । खुट्टामा चप्पल लगाएको छु । अहिलेसम्म केही खाएको पनि छैन ।
यहाँ बिहान ८ बजेदेखि ३ बजेसम्म गाडीहरु चलिरहेका छन् । नेपाली दूतावासबाट पहल गरेर मेरो उद्धार गरिदिए हुन्थ्यो । दूतावास यहाँबाट ३५० किलोमिटर टाढा छ । म त्यहाँसम्म जान सक्ने अवस्था छैन । म अब के गरौं ?
नेपालमा श्रीमती, छोराछोरी छन् । जसोतसो घर फर्किने व्यवस्था मिलाइदिए हुन्थ्यो । नत्र एम्बेसीमै शरण लिन पाए पनि हुन्थ्यो ।
मेरो कुरा दूताबाससम्म पुर्‍याइदिनुहोला ।